Aroos Uu Qarax Ka Dhacay, Warqad Iyo Qof Aan La Fileyn Oo Laga Shakiyay Iyo Xogo Kale Oo Xiiso Leh
Saturday May 05, 2018 - 16:18:09 in Wararka by Abdi A.
Delhi-(Caalami-News)-Kaddib baaritaan ballaaran, booliska Hindiya ayaa macallim wax ka dhiga koleej dalkaasi ku yaalla waxa ay uu soo xireen "qarax ka dhacay guri ay lamaane isku arooseen" oo uu ku dhintay nin markaas un guursaday xaaskiisi
Delhi-(Caalami-News)-Kaddib baaritaan ballaaran, booliska Hindiya ayaa macallim wax ka dhiga koleej dalkaasi ku yaalla waxa ay uu soo xireen "qarax ka dhacay guri ay lamaane isku arooseen" oo uu ku dhintay nin markaas un guursaday xaaskiisiina ay ku dhaawacantay.
Soutik Biswas ayaa ka soo warramaya sida uu isbadelka aanan la filayn ugu yimid baaritaanka lagu hayay dilkii ay ka amakaageen dadka Hindiya.
Lahaanshaha sawirkaORISSA POLICE
Warqaddan aan la garanayn cidda soo dirtay ayaa laga helay xog la dabageli karo
Baadhayaasha ayaa sidoo kale waxa ay qoreen liiska magacyada dad ka badan toban kuwaas laga shakisan yahay, hasayeeshee ma aysan helin wax dadkaasi lagu dabageli karo. Kiiska waa uu sii daciifayay, hasayeeshee maadaama dadweynaha iyo warbaahintuba ay cadaadis wadeen ayaa dowladda waxa ay kiiska ku wareejisay waaxda baarta dambiyada waa weyn.
Sawir laga qaaday muuqaal laga duubay jikada Sahu qaraxa kaddib
Booliska ayaa si khaldan u akhriyay magacii 'been abuurka ahaa' ee ku qornaa rasiidka
Baadhitaan weyn oo ay sameeyeen saynisyahannada ayaa lagu helay astaanta faro aan meelno loo raaci karin oo laga helay warqadda. Waxa ay isku dayeen inay qofka warqadda soo diray ku raadiyaan candhuufta uu mariyay bashqadda si uu isugu dhajiyo, hasayeeshee cidna lama helin.
Mr Meher ayaa maamulaha koleejka waxaa kala wareegay hooyada dhashay wiilka qaraxa lagu dilay
In ka badan 800 oo qof ayaa guriga Mr Sahu kaga qeybgalay arooskiisa
Baadhayaasha aya sheegay in arooryo diiran oo bishii Febraayo ah uu ninkaasi diyaar u ahaa inuu bambaanada u diro goobtii ay ku socotay.
Mr Meher ayaa si joogta ah u soo qaban qaabin jiray xafladaha ay bulshadu qabsadaan
"Aad baan uga cadhooday arrinta, waanan u qaadan waayay bahdilka la ii gaystay," ayaa la sheegay in Mr Meher uu u todobaadkii tegay u sheegay booliska.